ယူနိုကျတကျ Vs လီဗာပူး ?? – မိုကျကယျအိုဝငျရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ခနျ့မှနျးခကျြမြား - SPORTS MYANMAR
ယူနိုကျတကျ Vs လီဗာပူး ?? – မိုကျကယျအိုဝငျရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ခနျ့မှနျးခကျြမြား
By Edi Tor October 17, 2019
ဒီရာသီ ရဲ့ ဒုတိယမွောကျ နိုငျငံတကာ ပှဲစဉျ ကာလ ပွီးဆုံး ပွီးနောကျ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲတှေ ပွနျလာ ပါပွီ။ ၁၇ ပှဲဆကျ ပရီးမီးယားလိဂျ နိုငျပှဲဆကျ မှတျတမျး ရရှိ ထားခဲ့တဲ့ ထိပျဆုံး နရောက လီဗာပူး အသငျးဟာ တနင်ျဂနှနေမှေ့ာ အိုးထရပျဖို့ဒျကို သှားကစား ရမှာ ဖွဈပွီး ဒီပှဲဟာ ရာသီ တဈခုမှာ ပရိတျသတျတှေ စိတျဝငျစားမှု အရှိဆုံး ပှဲတှေ ထဲက တဈခု ဖွဈပါတယျ။
၁~ တော့တငျဟမျ Vs ၀ကျဖို့ဒျ
၀ကျဖို့ဒျ အသငျးဟာ ဒီရာသီ နိုငျပှဲ တဈပှဲမှ မရသေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ၎င်းငျးတို့ဟာ ရှကျဖီးနဲ့ Bramall Lane မှာ ကစား ခဲ့တဲ့ နောကျဆုံး ပှဲစဉျမှာ clean sheet ရခဲ့ပွီး ဒါဟာ နောကျဆုံး ပရီးမီးယားလိဂျ ၁၉ ပှဲမှာ ပထမဦးဆုံး အကွိမျ ဖွဈပါတယျ။ စပါးဟာ နောကျဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျ ၂ ပှဲမှာ ပေးဂိုး ၁၀ ဂိုး အထိ ရှိထားခဲ့ပွီး ပိုခကျြတီနို ရဲ့ အသငျးဟာ လမျးကွောငျးမှနျပျေါ ပွနျလညျ ရောကျရှိ နိုငျဖို့ အတှကျ အနိုငျ ၃ မှတျကို အထူး လိုအပျ နပေါတယျ။
စပါးဟာ ဒီရာသီ နောကျဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ အိမျကှငျး ပှဲစဉျ ၄ ပှဲမှာ ၃ ပှဲ အနိုငျ ရရှိ ထားခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတျော ကတော့ စပါး ဟာ အမှတျပေးဇယား အောကျခွမှော ကြောကျခနြတေဲ့ ၀ကျဖို့ဒျ အသငျးနဲ့ ပှဲမှာ အဖိုးတနျ အနိုငျ ၃ မှတျ ရရှိလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ ထားပါတယျ။
မိုကျကယျအိုဝငျရဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြ ကတော့ .. တော့တငျဟမျ ၃ – ၁ ၀ကျဖို့ဒျ
၂~ ခြဲလျဆီး Vs နယူးကာဆယျ
နယူးကာဆယျဟာ စိနျ့ဂြိမျးပကျမှာ နောကျဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျမှာ ပုံစံကောငျး မပွသ နိုငျခဲ့တဲ့ မနျယူနိုကျတကျ အသငျးကို တဈပှဲလုံး အသာစီးနဲ့ ခွစှေမျးပွ ကစားကာ ထိုကျထိုကျတနျတနျ အနိုငျ ရခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး နယူးကာဆယျ အနနေဲ့ ဒီတဈပတျ စတနျးဖို့ဒျဘရဈချြမှာ လနျးဆနျး တကျကွှပွီး စိတျလှုပျရှား စရာ ကောငျးတဲ့ ခြဲလျဆီး အသငျးကို တားဆီးဖို့ အတှကျ အကောငျးဆုံး လုပျပွဖို့ လိုအပျ ပါတယျ။
ခြဲလျဆီးဟာ ပွိုငျပှဲစုံ နောကျဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျ ၄ ပှဲစလုံးကို အနိုငျ ရရှိခဲ့ပွီး လကျရှိ အခြိနျမှာ ဂိုးသှငျးစှမျးရညျလညျး ထကျမွကျ နပေါတယျ။ ဖရနျ့လမျးပတျရဲ့ အသငျးဟာ ရာသီ အဖှငျ့ ပှဲစဉျမှာ ယူနိုကျတကျကို အိုးထရပျဖို့ဒျမှာ ဂိုးပွတျ ရှုံးခဲ့ ပမေယျ့လညျး အခြိနျတိုလေး အတှငျးမှာတငျ လမျးကွောငျး မှနျပျေါကို ရောကျနတောကို တှရေ့ပါတယျ။
မိုကျကယျအိုဝငျရဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြ ကတော့ .. ခြဲလျဆီး ၃ – ၁ နယူးကာဆယျ
၃~ ခရဈစတယျပဲလစျေ့ Vs မနျစီးတီး
ကြှနျတျော ကတော့ ပဲလစျေ့ဟာ လနျဒနျစတဒေီယမျမှာ နောကျဆုံး ကစား ခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျမှာ အရမျး ကောငျးခဲ့ တယျလို့ ထငျပါတယျ။ ၂၀၁၉ ခုနှဈ အတှငျးမှာ လီဗာပူး (၃၀) နဲ့ စနနေေ့ ဆဲဟတျပကျ ကို လာကစားမယျ့ မနျစီးတီး (၃၃) တို့သာ ခရဈစတယျပဲလစျေ့ထကျ အဝေးဂိုးမှာ ရမှတျ ပိုမို စုဆောငျး နိုငျတဲ့ အသငျးတှေ ဖွဈကွ ပါတယျ။
ပဲလစျေ့ဟာ ဒီရာသီ နောကျဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ အိမျကှငျး ၄ ပှဲစလုံး ရှုံးနိမျ့ ထားခဲ့ခွငျး မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့လညျး ရှိုငျးဟော့ဆနျ ရဲ့ အသငျးဟာ မနျစီးတီးလို အရညျအသှေးမြိုးနဲ့ အသငျးနဲ့တော့ မဆုံတှေ့ ရသေးပါဘူး။ ကြှနျတျော ကတော့ မနျစီးတီးပဲ အဝေးကှငျးမှာ အမွငျ့ဆုံး ရမှတျ ရယူ နိုငျလိမျ့မယျလို့ ထငျပါတယျ။
မိုကျကယျအိုဝငျရဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြ ကတော့ .. ခရဈစတယျပဲလစျေ့ ၀ – ၂ မနျစီးတီး
၄~ မနျယူနိုကျတကျ Vs လီဗာပူး
မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျ အသငျးဟာ နောကျဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ လိဂျပှဲစဉျ ၁၃ ပှဲမှာ နိုငျပှဲ ၂ ပှဲသာ ရထားခဲ့ပွီး ၅ ပှဲသရေ ၆ ပှဲရှုံးထား ခဲ့ပါတယျ။ စိနျ့ဂြိမျးပကျမှာ နောကျဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ ယူနိုကျတကျရဲ့ စှမျးဆောငျရညျကို တိုငျးတာ လိုကျမယျ ဆိုရငျတော့ ဗဟိုနောကျခံလူ ဟယျရီမကျဂှိုငျးယားဟာ နယူးကာဆယျ ပငျနယျတီ ဧရိယာထဲမှာ ဘောလုံး ထိခကျြ ၄ ကွိမျ ရှိခဲ့ပွီး အခွား ယူနိုကျတကျ ကစားသမားတှထေကျ မြားနပေါတယျ။
လီဗာပူးဟာ အိုးထရပျဖို့ဒျမှာသာ အနိုငျ ရခဲ့မယျ ဆိုရငျ မနျစီးတီးရဲ့ ၁၈ ပှဲဆကျ လိဂျနိုငျပှဲ စံခြိနျကို လျိုကျမှီ သှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ယာဂနျကလော့ရဲ့ အသငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ အပတျတှမှော ကံတရားရဲ့ ဖေးမမှုတှေ ရခဲ့ပမေယျ့ ကြှနျတျော ကတော့ လီဗာပူးဟာ ယူနိုကျတကျ အတှကျတော့ အရမျးမွနျလှနျးတဲ့ အပွငျ အရမျးကိုလညျး စိတျဓာတျ ပွငျးထနျ နပေါတယျ။ အိုလီဂနျနာဆိုးရှားရဲ့ အသငျး အနနေဲ့ ကတော့ ဒဏျရာ ကနေ ပွနျလာတော့မယျ့ အဓိက ကစားသမား တှရေဲ့ လုပျအားကိုသာ မြှျောလငျ့ နရေမှာပါ။
မိုကျကယျအိုဝငျရဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြ ကတော့ .. မနျယူနိုကျတကျ ၁ – ၂ လီဗာပူး
၅~ ရှကျဖီးယူနိုကျတကျ Vs အာဆငျနယျ
ရှကျဖီး ယူနျိုကျတကျဟာ ပွိုငျပှဲစုံ နောကျဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ ၃ ပှဲမှာ ဂိုးသှငျးနိုငျခဲ့ခွငျး မရှိခဲ့ ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ရှကျဖီးဟာ နောကျဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ အိမျကှငျး ပှဲစဉျမှာ လီဗာပူး ဆီက သရေ တဈမှတျ မရ ခဲ့တာ ကတော့ ကံမကောငျး ခဲ့တာပါ။
အာဆငျနယျ အသငျးဟာ နောကျဆုံး ကစား ခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲစုံ ၄ ပှဲမှာ ပေးဂိုး တဈဂိုးသာ ရှိထားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျော ကတော့ ဂနျးနားတို့ Bramall Lane မှာ သရတေဈမှတျနဲ့ ကနြေပျ ခဲ့ရတယျ ဆို၇ငျ အံ့သွ မိမှာတော့ မဟုတျပါဘူး။ ခရဈဝိုငျဒါရဲ့ အသငျးဟာ ဒီရာသီ လိဂျပွိုငျပှဲမှာ တဈဂိုးထကျ ပိုရှုံး ထားတာ မရှိ ခဲ့ပါဘူး။ ကြှနျတျော ကတော့ ၎င်းငျးတို့ ဂနျးနားတို့ ဆီက သရေ တဈမှတျ ရယူ သှားလိမျ့မယျလို့ ထငျပါတယျ။
မိုကျကယျအိုဝငျရဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြ ကတော့ .. ရှကျဖီးယူနိုကျတကျ ၁ – ၁ အာဆငျနယျ
အခွား ပှဲစဉျတှေ အတှကျ မိုကျကယျအိုဝငျရဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြမြား
အဲဗာတနျ ၁ – ၂ ၀ကျဟမျး
အကျစတှနျဗီလာ ၂ – ၂ ဘရိုကျတနျ
၀ုဖျ ၂ – ၀ ဆောကျသမျတနျ
ဘုနျးမောကျ ၂ – ၀ နော့ဝှဈ
လကျစတာ ၁ – ၁ ဘနျလေ
ယူနိုက်တက် Vs လီဗာပူး ?? – မိုက်ကယ်အိုဝင်ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ခန့်မှန်းချက်များ
ဒီရာသီ ရဲ့ ဒုတိယမြောက် နိုင်ငံတကာ ပွဲစဉ် ကာလ ပြီးဆုံး ပြီးနောက် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲတွေ ပြန်လာ ပါပြီ။ ၁၇ ပွဲဆက် ပရီးမီးယားလိဂ် နိုင်ပွဲဆက် မှတ်တမ်း ရရှိ ထားခဲ့တဲ့ ထိပ်ဆုံး နေရာက လီဗာပူး အသင်းဟာ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ အိုးထရပ်ဖို့ဒ်ကို သွားကစား ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဒီပွဲဟာ ရာသီ တစ်ခုမှာ ပရိတ်သတ်တွေ စိတ်ဝင်စားမှု အရှိဆုံး ပွဲတွေ ထဲက တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
၁~ တော့တင်ဟမ် Vs ၀က်ဖို့ဒ်
၀က်ဖို့ဒ် အသင်းဟာ ဒီရာသီ နိုင်ပွဲ တစ်ပွဲမှ မရသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ၎င်းတို့ဟာ ရှက်ဖီးနဲ့ Bramall Lane မှာ ကစား ခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံး ပွဲစဉ်မှာ clean sheet ရခဲ့ပြီး ဒါဟာ နောက်ဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ် ၁၉ ပွဲမှာ ပထမဦးဆုံး အကြိမ် ဖြစ်ပါတယ်။ စပါးဟာ နောက်ဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် ၂ ပွဲမှာ ပေးဂိုး ၁၀ ဂိုး အထိ ရှိထားခဲ့ပြီး ပိုချက်တီနို ရဲ့ အသင်းဟာ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ပြန်လည် ရောက်ရှိ နိုင်ဖို့ အတွက် အနိုင် ၃ မှတ်ကို အထူး လိုအပ် နေပါတယ်။
စပါးဟာ ဒီရာသီ နောက်ဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ အိမ်ကွင်း ပွဲစဉ် ၄ ပွဲမှာ ၃ ပွဲ အနိုင် ရရှိ ထားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ စပါး ဟာ အမှတ်ပေးဇယား အောက်ခြေမှာ ကျောက်ချနေတဲ့ ၀က်ဖို့ဒ် အသင်းနဲ့ ပွဲမှာ အဖိုးတန် အနိုင် ၃ မှတ် ရရှိလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့် ထားပါတယ်။
မိုက်ကယ်အိုဝင်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက် ကတော့ .. တော့တင်ဟမ် ၃ – ၁ ၀က်ဖို့ဒ်
၂~ ချဲလ်ဆီး Vs နယူးကာဆယ်
နယူးကာဆယ်ဟာ စိန့်ဂျိမ်းပက်မှာ နောက်ဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ပုံစံကောင်း မပြသ နိုင်ခဲ့တဲ့ မန်ယူနိုက်တက် အသင်းကို တစ်ပွဲလုံး အသာစီးနဲ့ ခြေစွမ်းပြ ကစားကာ ထိုက်ထိုက်တန်တန် အနိုင် ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း နယူးကာဆယ် အနေနဲ့ ဒီတစ်ပတ် စတန်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျမှာ လန်းဆန်း တက်ကြွပြီး စိတ်လှုပ်ရှား စရာ ကောင်းတဲ့ ချဲလ်ဆီး အသင်းကို တားဆီးဖို့ အတွက် အကောင်းဆုံး လုပ်ပြဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။
ချဲလ်ဆီးဟာ ပြိုင်ပွဲစုံ နောက်ဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် ၄ ပွဲစလုံးကို အနိုင် ရရှိခဲ့ပြီး လက်ရှိ အချိန်မှာ ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်လည်း ထက်မြက် နေပါတယ်။ ဖရန့်လမ်းပတ်ရဲ့ အသင်းဟာ ရာသီ အဖွင့် ပွဲစဉ်မှာ ယူနိုက်တက်ကို အိုးထရပ်ဖို့ဒ်မှာ ဂိုးပြတ် ရှုံးခဲ့ ပေမယ့်လည်း အချိန်တိုလေး အတွင်းမှာတင် လမ်းကြောင်း မှန်ပေါ်ကို ရောက်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မိုက်ကယ်အိုဝင်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက် ကတော့ .. ချဲလ်ဆီး ၃ – ၁ နယူးကာဆယ်
၃~ ခရစ်စတယ်ပဲလေ့စ် Vs မန်စီးတီး
ကျွန်တော် ကတော့ ပဲလေ့စ်ဟာ လန်ဒန်စတေဒီယမ်မှာ နောက်ဆုံး ကစား ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ အရမ်း ကောင်းခဲ့ တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွင်းမှာ လီဗာပူး (၃၀) နဲ့ စနေနေ့ ဆဲဟတ်ပက် ကို လာကစားမယ့် မန်စီးတီး (၃၃) တို့သာ ခရစ်စတယ်ပဲလေ့စ်ထက် အဝေးဂိုးမှာ ရမှတ် ပိုမို စုဆောင်း နိုင်တဲ့ အသင်းတွေ ဖြစ်ကြ ပါတယ်။
ပဲလေ့စ်ဟာ ဒီရာသီ နောက်ဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ အိမ်ကွင်း ၄ ပွဲစလုံး ရှုံးနိမ့် ထားခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ရွိုင်းဟော့ဆန် ရဲ့ အသင်းဟာ မန်စီးတီးလို အရည်အသွေးမျိုးနဲ့ အသင်းနဲ့တော့ မဆုံတွေ့ ရသေးပါဘူး။ ကျွန်တော် ကတော့ မန်စီးတီးပဲ အဝေးကွင်းမှာ အမြင့်ဆုံး ရမှတ် ရယူ နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မိုက်ကယ်အိုဝင်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက် ကတော့ .. ခရစ်စတယ်ပဲလေ့စ် ၀ – ၂ မန်စီးတီး
၄~ မန်ယူနိုက်တက် Vs လီဗာပူး
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းဟာ နောက်ဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ လိဂ်ပွဲစဉ် ၁၃ ပွဲမှာ နိုင်ပွဲ ၂ ပွဲသာ ရထားခဲ့ပြီး ၅ ပွဲသရေ ၆ ပွဲရှုံးထား ခဲ့ပါတယ်။ စိန့်ဂျိမ်းပက်မှာ နောက်ဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုင်းတာ လိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ ဗဟိုနောက်ခံလူ ဟယ်ရီမက်ဂွိုင်းယားဟာ နယူးကာဆယ် ပင်နယ်တီ ဧ၇ိယာထဲမှာ ဘောလုံး ထိချက် ၄ ကြိမ် ရှိခဲ့ပြီး အခြား ယူနိုက်တက် ကစားသမားတွေထက် များနေပါတယ်။
လီဗာပူးဟာ အိုးထရပ်ဖို့ဒ်မှာသာ အနိုင် ရခဲ့မယ် ဆိုရင် မန်စီးတီးရဲ့ ၁၈ ပွဲဆက် လိဂ်နိုင်ပွဲ စံချိန်ကို လိုက်မှီ သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယာဂန်ကလော့ရဲ့ အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်တွေမှာ ကံတရားရဲ့ ဖေးမမှုတွေ ရခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တော် ကတော့ လီဗာပူးဟာ ယူနိုက်တက် အတွက်တော့ အရမ်းမြန်လွန်းတဲ့ အပြင် အရမ်းကိုလည်း စိတ်ဓာတ် ပြင်းထန် နေပါတယ်။ အိုလီဂန်နာဆိုးရှားရဲ့ အသင်း အနေနဲ့ ကတော့ ဒဏ်၇ာ ကနေ ပြန်လာတော့မယ့် အဓိက ကစားသမား တွေရဲ့ လုပ်အားကိုသာ မျှော်လင့် နေရမှာပါ။
မိုက်ကယ်အိုဝင်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက် ကတော့ .. မန်ယူနိုက်တက် ၁ – ၂ လီဗာပူး
၅~ ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် Vs အာဆင်နယ်
ရှက်ဖီး ယူနိုက်တက်ဟာ ပြိုင်ပွဲစုံ နောက်ဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ ၃ ပွဲမှာ ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရှက်ဖီးဟာ နောက်ဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ အိမ်ကွင်း ပွဲစဉ်မှာ လီဗာပူး ဆီက သရေ တစ်မှတ် မရ ခဲ့တာ ကတော့ ကံမကောင်း ခဲ့တာပါ။
အာဆင်နယ် အသင်းဟာ နောက်ဆုံး ကစား ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲစုံ ၄ ပွဲမှာ ပေးဂိုး တစ်ဂိုးသာ ရှိထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ကတော့ ဂန်းနားတို့ Bramall Lane မှာ သရေတစ်မှတ်နဲ့ ကျေနပ် ခဲ့၇တယ် ဆို၇င် အံ့သြ မိမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ခရစ်ဝိုင်ဒါရဲ့ အသင်းဟာ ဒီရာသီ လိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ တစ်ဂိုးထက် ပိုရှုံး ထားတာ မရှိ ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော် ကတော့ ၎င်းတို့ ဂန်းနားတို့ ဆီက သရေ တစ်မှတ် ရယူ သွားလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မိုက်ကယ်အိုဝင်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက် ကတော့ .. ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် ၁ – ၁ အာဆင်နယ်
အခြား ပွဲစဉ်တွေ အတွက် မိုက်ကယ်အိုဝင်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်များ
အဲဗာတန် ၁ – ၂ ၀က်ဟမ်း
အက်စတွန်ဗီလာ ၂ – ၂ ဘရိုက်တန်
၀ုဖ် ၂ – ၀ ဆောက်သမ်တန်
ဘုန်းမောက် ၂ – ၀ နော့ဝှစ်
လက်စတာ ၁ – ၁ ဘန်လေ